Becker's House, Casa c/piscina Resort Interior SP - I-Airbnb
Thermas de Santa Barbara, São Paulo, i-Brazil
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Marcia
Ngo-280 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
I-Becker's House, Indlu enhle, uxhumano oluhle kakhulu lwe-wi-fi,
Amamitha ayi-100 ukusuka etiyela, igumbi lokudlela elikhulu nelokuphumula, ikhishi elinazo zonke izitsha ezidingekayo, ama-suites ama-2 (elilodwa eline-air conditioning) kanye ne-demi suite encane esitezi esiphansi. I-Smart TV 65 inch living room, gourmet balcony with barbecue, 9x4 pool, Woza uzojabulisa kakhulu Indawo Yokungcebeleka emangalisa kakhulu e-Brazil.
Woza uzojabulisa kakhulu Indawo Yokungcebeleka Yokuhlala emangalisa kakhulu e-Brazil, emaphakathi ne-7 million square metres yendawo egciniwe, ehlinzekwa ngamanzi amaminerali angcono kakhulu emhlabeni, ehlinzeka ngayo yonke intuthuko kusukela kumachibi okubhukuda kuya eshaweni.
Sinezinga elimangalisayo lamazwe ngamazwe i-Spa&Aqua,(usuku Sebenzisa isaphulelo esingu-50% ngekhadi) amakilabhu aphelele angu-2 (amakhadi ama-4), ukudoba kwamachibi ama-5 (ukufinyelela mahhala) (enye i-Trapiche pier) yezemidlalo okungezona izimoto ezifana ne-stand up paddle , umkhumbi, i-ecoposta eno-6km, umzila wemvelo ogcina empophomeni encane (ene-pick nick yendawo) igalofu elincane, iklabhu yebhayisikili enemali mboleko yamabhayisikili yamahhala. kukhona nempophoma enhle imizuzu eyi-10 ukusuka e-condominium enesakhiwo esihle kakhulu nemidlalo eyingozi kakhulu.
Emnyango we-condominium sinenxanxathela yezitolo, ikhemisi, imakethe ene-(ibhikawozi newayini, ingadi yemvelo) i-confectionery, indawo yokudlela, isitolo sezilwane ezifuywayo, udokotela wamazinyo, udokotela kanye negalaji likaphethiloli.
I-Santa Barbara Resort Residence isendaweni eyinhlanhla, osebeni lweCastello Branco, omunye wemigwaqo emikhulu eBrazil*, eqinisekisa uhambo olusheshayo, olunokuthula noluphephile.
*Ihlukaniswe yiNational Transport Confederation (CNT), ngokocwaningo lomgwaqo omkhulu lwangowezi-2019
I-wifi esheshayo – 280 Mbps
Hlola ezinye izinketho ezise- Thermas de Santa Barbara namaphethelo